केन्टाक्की फ्राइड चिकेनको पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामदार माग सम्बन्धी वेबसाईट
केन्टाक्की फ्राइड चिकेनमा आफुले चाहेको सिफ्टमा
पार्ट टाइम (आरुबाइतो) काम सुरू गरौँ !
काम गर्ने दिन (बार) को लागि पहिले नै आवेदन दिन सकिने सिफ्ट प्रणाली भएकोले,
तपाईको लाइफ स्टाइलसँग मिलाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ !
अध्ययन वा रूचि आदिको लागि, आफुले चाहे अनुरूप समय समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ !
ओपनिङ्गका लागि स्टाफको आवश्यकता
१. ग्राहक सेवा
आनन्ददायी अभिवादनबाट स्वादिष्ट भोजनको सुरुवात हुन्छ। ग्राहकलाई स्वादिष्ट भोजन टक्र्याउनका लागि, पसल भित्र आनन्ददायी रूपले समय व्यतित गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ। पहिलो, प्रफुल्लित मुद्रामा प्रष्ट स्वरले ग्राहकलाई स्वागत गरी, अर्डर लिने बेलामा पनि विनम्र भई, हँसिलो मुहार बनाउन नबिर्सनु होला। चाँडो र सहज रुपमा खानेकुरा प्रदान गर्नको लागि, फ्राइ गर्ने व्यक्ति र किचेनको सदस्य सँग सहकार्य गरी, स्याण्डविच वा साइड मेन्यु पकाउने काम पनि गर्ने गर्नु होला। साथै, पसल भित्र सफा राख्नु, नियमित रूपमा पसल भित्र जाँच गर्नु आदि पनि काउन्टर सदस्यको महत्वपूर्ण काम हो। अन्त्यमा, उक्त दिनको भोजनको लागि KFC रोज्नु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, हँसिलो मुहारले बिदाइ गर्ने गर्नु होला।
काउन्टरको काम !
・ हँसिलो मुहारले ग्राहकलाई स्वागत गर्ने।
・अर्डर लिने बेला विनम्र भई, हँसिलो मुहार बनाइ ठिक सँग अर्डर लिने।
・टिमवर्कलाई आत्मसाथ गरी, अरू स्टाफलाई फलो गर्ने।
・पसल भित्रको ग्राहक बस्ने मेच-टेवल आदि इत्यादी सँधै सफा राख्ने।
गर्वका साथ, परम्परागत "मिठो स्वाद" प्रदान गर्ने। KFC भनेपछि "ओरिजिनल चिकेन"। त्यस बाहेक पनि स्याण्डविच वा कर्नेल क्रिस्पि आदि, विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू छन्। त्यस्ता विभिन्न परिकारहरू एक-एकलाई ध्यानपूर्वक, हातले पकाएर, ग्राहकलाई पस्कनु नै, कुकिङ्ग गर्नेको काम हो। विशेषगरि "ओरिजिनल चिकेन" को सन्दर्भमा, आफ्नै चिकेन कुकिङ्ग प्रमाणिकरण "चिकेन स्पेशलिस्ट" को योग्यता भएको स्टाफको व्यवस्थापनमा आधारित रहि, कर्नेल स्यान्डर्स बाट प्राप्त भएको परम्परागत रेसिपी अनुसार, अपरिवर्तित स्वादलाई ४५ वर्ष देखि बचाउँदै आएका छौं ।
किचेनको काम !
＜ फ्राइ गर्ने व्यक्ति ＞
・पोटेटो लगायतका साइड आइटम पकाउने।
・बिस्कुट लगायतका साइड आइटमलाई ओभनमा बेक गर्ने।
(यो काम किचेनले गर्ने पसलहरु पनि छन्)
・स्याण्डविच, ट्विस्टर आदि बनाउने।
・पकाउने ठाउँको उपकरणहरुको सरसफाई समय समयमा गरिराख्ने।
＜ पकाउने एरिया ＞
・"ओरिजिनल चिकेन", फिलेट चिकेन, सिमित समयावधिको चिकेनहरू पकाउने।
・पकाउने बेला नहुन्जेल पकाउने सरसामानको तयारी गर्ने।
・पकाउने भाँडा, पकाउने एरिया आदिको सरसफाई समय समयमा राम्रोसँग गरि रहने ।
・प्रयोग गर्ने उपकरणहरु दैनिक रुपमा मर्मत सम्भार गर्ने।
सबैले पर्खि बसेको टेवलमा भर्खरै पाकेको तात्तातो स्वादलाई सुरक्षित ड्राइभिंग गरेर डेलिभर गर्ने । KFC का केही सिमित पसलहरूबाट डेलिभरीको काम भई, मोटर साइकल अथवा गाडीबाट ग्राहकहरू समक्ष खानेकुरा डेलिभरी गरिन्छ। डेलिभरी गर्नु अघि नक्सा हेरी रूटको जानकारी लिए पश्चात, सुरक्षित ड्राइभिंग गरेर डेलिभरीको लागि प्रस्थान गर्ने हुन्छ। घर लगायत, अफिस वा पब्लिक अफिसबाट पनि अर्डर आउँछ। जस्तो अवस्थामा भएपनि, मिठो मानि खाइदियोस् भन्नको लागि, सामान दिने बेलामा सधैं हँसिलो अनुहार बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हुन्छ ।
・देशभरीको लगभग १०० वटा पसलहरूबाट यो सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
・भर्खरै पाकेको तात्तातो खानेकुरालाई मोटर साइकल अथवा गाडीबाट डेलिभरी गरिन्छ।
・नक्सा बारे राम्रोसँग जानकारी लिई, सुरक्षित ड्राइभिंगका साथ प्रस्थान गरिन्छ।
・सामान दिने बेलामा सँधै हँसिलो अनुहार रहन्छ।
कामदार मागको सुची हेर्न
आवेदकको उमेरको सीमा हुन्छ?
१५ वर्ष भन्दा माथिका महिला पुरूष जसले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। (निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई अनुमति छैन)
म विदेशी हुँ, के मैले आवेदन दिन सक्छु?
हजुर, आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अन्तर्वार्ताको बेला, काम गर्न सकिने बसोबास अनुमति भएको भिसा रहेको भन्ने कुरा निश्चित गर्न सकिने गरी पासपोर्ट, विदेशी नागरिक दर्ता प्रमाणपत्र (गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्योउ), तोकेको काम गर्न पाउने अनुमतिपत्र (सिखाकु-गाइ खाचुदोउ क्योखास्योउ) (बिदेशी बिद्यार्थी, प्रि-कलेज विद्यार्थी, पारिवारिक बसोबास भिसा हुने व्यक्ति) को सक्कल लिएर आउनुहोला।
पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामको करार गर्ने बेलामा, के-के आवश्यक हुन्छ?
निम्न वस्तुहरू आवश्यक हुन्छ।
・स्वास्थ्य बिमा कार्ड(केन्कोउ होकेन् स्योउ)को फोटोकपी
・बैंक पासबुकको फोटोकपी (यो तलब डिपोजिट गर्नको लागि हो । नामको फुरिगाना, शाखा कार्यालय, खाता नम्बर भएको पानाको फोटोकपी गर्नुहोस्)
・फोटो १ प्रति
・इन्खान (नामको छाप)
[१८ वर्ष मुनिका व्यक्ति]
१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिका लागि, माथि उल्लेखित वस्तु सहित थप निम्न वस्तु आवश्यक हुन्छ।
・आफू बस्ने क्षेत्रको नगरपालिका आदिबाट जारी गरिएको बसोबास पत्रमा उल्लेखित विवरणको प्रमाणपत्र (ज्युमिन्-ह्योउ किसाइ जिकोउ स्योउमेइ-स्यो)
विदेशी नागरिकका लागि, माथि उल्लेखित वस्तु सहित थप निम्न वस्तु आवश्यक हुन्छ।
・विदेशी नागरिक दर्ता प्रमापणत्र (गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो)
・तोकेको काम गर्न पाउने अनुमतिपत्र (सिखाकु-गाइ खाचुदोउ क्योखास्योउ) (बिदेशी विद्यार्थी, प्रि-कलेज विद्यार्थी, पारिवारिक बसोबास भिसा हुने व्यक्ति)
परीक्षा आदि भएर पढाइमा व्यस्त हुने बेलामा बिदा लिन सकिन्छ?
सकिन्छ। पहिलेनै आफुले चाहेजस्तो सिफ्टको तालिका मिलाउने गर्छौँ।
कपालको स्टाइल, बाहिरी रूप आदिमा कुनै सिमा तोकिएको छ?
बाहिरी रुप सफा राख्न ध्यान दिनु होला । त्यस बाहेक कपालको स्टाइल (रङ्ग, लम्बाई) को नियम भएकोले अन्तर्वार्ताको समयमा त्यसको वर्णन गर्नेछौं ।
कामको विवरण सम्बन्धी जानकारी गराउनुहोस् ।
KFC भनेको फुड सर्भिस गर्ने काम हो। सामान्य जानकारी निम्न अनुसार छन्।
काउन्टर ： काउन्टरमा ग्राहकको अर्डर लिएर, खानेकुरा प्रदान गर्ने गरिन्छ। पसल परिसर भित्र ग्राहकको सेवा सत्कार नै मुख्य काम हो।
किचेन：खानेकुरा पकाउने मुख्य काम हो।
डेलिभरी：ग्राहकबाट अर्डर लिएर, सामान डेलिभरी गर्ने गरिन्छ। डेलिभरीको लागि विशेष गाडी प्रयोग गरिने भएकोले, बाइकको लागि मोपेडको लाइसेन्स (गेन्चुकि मेन्क्यो), गाडीको लागि साधारण गाडीको लाइसेन्स (फुचुउ जिदोउस्या मेन्क्यो) आवश्यक हुनेछ।
कस्ता व्यक्तिहरूले पार्ट टाइम (आरुबाइतो)को काम गरिरहेका छन्?
उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थी देखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले धेरै काम गरिरहेका छन्। साथै, गृहिणीहरू, त्यस्तै बृद्ध बृद्धाहरु पनि धेरैजना सक्रिय हुनुहुन्छ।
तलब, पसलमा काम गरेको समय अनुसार घण्टाको दरले दिइनेछ। घण्टे तलब कामको तह अनुसार तोकिएको हुन्छ। पहिले ट्रेनी भनिने तहबाट काम सुरू गरी, क्षमताको आधारमा क्रमैसँग टिम मेम्बर, स्टार, अल स्टार, अपरेसन ट्रेनर, सिफ्ट मेनेजरमा पद बढुवा हुँदै जानेछ।
ब्रेक लिने बारेमा
ब्रेक लिँदा, पसलको नियम, एवम् समय हेर्ने ईन्चार्जको निर्देशनलाई पालना गर्नुहोस्।
ब्रेक लिने समय,६ घण्टा भन्दा बढी काम गरेमा：४५ मिनेट, ८ घण्टाभन्दा बढी काम गरेमा：६० मिनेट को मान्यता दिइएको छ।
सामाजिक बिमा：स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन बिमा, श्रम दुर्घटना बिमा, रोजगारी बिमा
कामका महत्वपुर्ण बुँदाहरु
ग्राहक सेवा, पकाउनेको लागि सहायक, डेलिभरी
तलब, घण्टे तलब
पसल अनुसार फरक हुन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि पसलमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोस्।
सिफ्ट सिस्टम हुन्छ। आफुले चाहेको काम गर्ने समयको लागि आवेदन दिनुहोस्। विस्तृत जानकारीका लागि पसलमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोस्।
आवेदन दिने उमेर
१५ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्ति। (निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई अनुमति छैन)
भर्तीको लागि लक्षित वर्ग
गृहिणी (श्रीमान समेत), विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, फ्रि टाइमरहरूलाई स्वागत छ। पार्ट टाइम (आरुबाइतो) काम र ग्राहक सेवाको अनुभव नभएका व्यक्तिले पनि ढुक्कसँग काम गर्न सकिनेछ।
स्थायी कर्मचारीमा नियुक्त हुन सक्ने
त्यस बाहेक विस्तृत जानकारीका लागि पसलमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोला।
कुनाल जी को पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामको २ बर्षे अनुभव
हामी हामी भएको कारणले गर्न सकिने कुरा
नेपालबाट जापान आएर साढे ४ वर्ष बित्यो। भाषाको अध्ययन मनपर्ने भएकोले, नेपाली भाषा बाहेक अङ्ग्रेजी, जापानी, स्पेनिस भाषा बोल्न सक्छु। साधारणतया फ्राइ गर्ने काम गर्छु, तर विदेशी ग्राहक आएको बेला, मैले डिल पनि गर्ने गर्छु। KFC नेपालमा पनि छ र पहिले देखिनै परिचित भएकोले, जापानमा पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामको लागि KFC नै रोजेँ।
अध्ययनले व्यस्त भएको बेला पनि स्वतन्त्र रुपमा सिफ्ट राख्न सकिने हुनाले खुसी लाग्छ !
KFC मा सिफ्ट तालिका हरेक हप्ता बुझाउने भएकोले, केही गर्ने योजना भएको बेला होस् या अध्ययनले व्यस्त भएको बेला, मिलाउन सजिलो हुने हुँदा आनन्द छ। साथै, सिनियरहरू पनि सबैजना सहयोगी भएकाले, मैले म्यानुअलको खान्जी नबुझेपनि, चित्र वा भिडियो देखाएर बुझिने गरी काम सम्बन्धी कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ। नेपालको बारे पनि रूचि लिइदिनु भएर, त्यहाँको चाडपर्व वा खानाको कुरा गरेर रमाइलो पनि गर्ने गरेका छौँ।
पिलर जी को पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामको १ बर्षे अनुभव
जापान आएर २ वर्ष बित्यो। म काम गर्ने पसलमा नेपाली नागरिक म बाहेक, फिलिपिनी नागरिक, थाइ नागरिक पनि पार्ट टाइम काममा सक्रिय रहेका छन्। विदेशी ग्राहक आएको बेला डिल गर्नु त छँदैछ, अरू विदेशी पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामदारहरू सँग कुराकानी गर्न पाउँदा गौरवान्वित हुन्छु। KFC मा टिम वर्कलाई महत्व दिइएकोले, सबै जनालाई फलो गर्न सक्ने गरी काउन्टर बाहेकको काम पनि अब बिस्तारै मेहेनत गरेर सिक्दै जान चाहन्छु।
सिनियर स्टाफले नम्रता पूर्वक सिकाइदिनु हुन्छ ।
पढ्न नसकिने खान्जी आयो भने, फुरिगानामा लेखिदिने आदि, KFC मा काम गर्ने सबै जना साँच्चिकै सहयोगी र नम्र हुनुहुन्छ। एक चोटि सुनेर नबुझेको कुरा पनि पटक पटक सिकाइदिनुहुने भएकोले आभारी छौं। साथै KFC मा विदेशी पार्ट टाइम (आरुबाइतो) कामदारहरू पनि धेरै भएकोले, धेरै साथीहरू बनिसके। परिवारै भन्न मिल्ने जतिको राम्रो सम्बन्ध भएकोले सबै जना मिलेर बलिङ्ग गर्न पनि गयौं । अझै धेरै काम गरेर पैसा जम्मा गरी यसपालि होक्काइदोउको लाभेन्डर फुल बगैंचामा जान चाहन्छु।
मिठो स्वादका निम्ति गरिएका प्रयास
सुरक्षित एवम् मिठो स्वाद कार्यान्वयन गर्नु
ढुक्क हुन सकिने सामाग्री प्रयोग गरी, पसलमै हातले बनाइने ताजा मिठो स्वादलाई उत्कृष्ट सर्भिसका साथ प्रदान गरिरहेका छौं। ४५ वर्ष देखि निरन्तरता दिँदै आएको हाम्रो यस मनोभावलाई, हामी जापान KFC होल्डिङ्गस् ग्रुपले “FHH＆H=Fresh (ताजा), Healthy (सुरक्षित एवम् स्वस्थ), Handmade (हातले बनाइएको) ＆ Hospitality (अतिथि सत्कार गर्ने मन)” हो भन्ने गरेका छौं।
प्रतिबद्धता नं १
KFC को "ओरिजिनल चिकेन" मा प्रयोग हुने "घरेलु हर्ब कुखुरा", देशभरका २०० KFC ले दर्ता गरेका ब्रिडिङ फार्महरूमा राम्रो सँग हुर्काईएका छन्। तापक्रम वा आद्रता आदि हुर्काईने वातावरण मिलाएर, कुखुराहरू बिना स्ट्रेस स्वस्थ र आरामसँग हुर्कने गरी, सँधै एकदम ध्यान दिएर हुर्काउन लागिपरेका छौं।
प्रतिबद्धता नं २
KFC को "ओरिजिनल चिकेन" आफैले प्रमाणिकरण गर्ने "चिकेन स्पेशलिस्ट" को योग्यता हासिल गरेका कुकिङ्ग ईन्चार्जको व्यवस्थापनमा, पकाउने गरिरहेका छौं। कर्नेल स्यान्डर्स बाट प्राप्त भएको परम्परागत रेसिपीमा आधारित रहेर, तयारी गर्ने देखि लिएर, पीठो दल्ने, फ्राइ भइसक्दा सम्म लगभग २० वटा प्रक्रिया पुरा गरेर, सबै पसलहरूमा हातैले तयार पारिन्छ।
प्रतिबद्धता नं ३
हाम्रो उद्देश्य भनेको, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखि, ग्राहकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नको लागि, जुनै पनि प्रयास गर्न नछोड्ने "हस्पिटालिटी माइण्ड" बोक्ने कुरा हो। ग्राहकलाई सत्कार गरेर, ग्राहकले खुसी महसुश गर्नुलाई आफ्नो खुसी सम्झिएर, हरेक स्टाफले भित्री मन देखि नै हँसिलो अनुहार बनाइ ग्राहकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भनेर सोचिरहेका हुन्छन्।